ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ ခိုင်မာတဲ့ အကျ လွှမ်းမိုးတဲ့ ပတ်တန် ပုံစံကို ဘယ်လိုရှာရမလဲ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ ဆောင်းပါးမှာ ပြန်ကန်တဲ့ ဖယောင်းတိုင်ပုံစံတွေအကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးပါပြီ. အဲ့ဒီထဲမှာ ပထမကန်ဒယ်တုံးတစ်ခုလုံးကို လွှမ်းမိုးထားတဲ့ ဒုတိယ ကန်ဒယ်ကို ပြောတဲ့ အကျ လွှမ်းမိုးတဲ့ ပတ်တန် ပုံစံဆိုတာကို မှတ်မိဦးမှာပါ. ဒီလိုပုံစံမျိုးတွေက ဈေးကွက်အတက်တွေမှာ တွေ့ရတတ်ပြီး သူ့ကိုတွေ့ရရင် ပြန်ကန်ပြီး ကျနိုင်မယ့် လာမယ့် ဈေးတန်းကို အချက်ပြပေးနိုင်ပါတယ်. ယခုဆောင်းပါးတွင် အားနည်းတဲ့ ယုံကြည်နိုင်မှုရာခိုင်နှုန်းနည်းတဲ့ ဆစ်ဂနယ်တွေထက် (ပိုမိုစစ်မှန်ခိုင်မာတဲ့ အချိန်တိုထရိတ်နိုင်စေမယ့်) ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ ခိုင်မာတဲ့ အကျ လွှမ်းမိုးတဲ့ ပတ်တန် ပုံစံအကြောင်းကို လေ့လာသင်ယူကြမှာပါ. ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ ခိုင်မာတဲ့ အကျ လွှမ်းမိုးတဲ့ ပတ်တန် ပုံစံကို ကြည့်နိုင်မယ့် အချက်တွေရှိပါတယ်:• ယခုပုံစံမှာ ဒုတိယမြောက် ကန်ဒယ်အတုံးက အရေးကြီးဆုံးပါ. သူက ပထမ အတုံးကိုလုံးဝ လွှမ်းမိုးနိုင်လောက်တဲ့ အရှည်ရှိရပါမယ်. တကယ်လို့ ပထမ ကန်ဒယ်တုံးက သိပ်မကြီးရင် အရင်ကန်ဒယ်တွေ (အနည်းဆုံး အတုံးနှစ်ခုကြား နှုန်းအကွာအဝေး) ကို ဂရုစိုက်ကြည့်ရပါမယ်. အဲ့ဒီအတုံးတွေအကုန်လုံးရဲ့ ကိုယ်ထည်က အဓိကကြည့်မယ့်ပစ်မှတ်ကန်ဒယ်(ဒုတိယကန်ဒယ်) ရဲ့ ကိုယ်ထဲထဲမှာ ၀င်နေရပါမယ်. ဒီအချက်တွေပြည့်စုံပြီဆိုရင် ခိုင်မာတဲ့ အကျ လွှမ်းမိုးတဲ့ ပတ်တန် ပုံစံ ပိုအားကောင်းနေပါပြီ. သို့သော် တကယ့်စစ်မှန်တဲ့ လွှမ်းမိုးခြုံငုံနိုင်တဲ့ ကန်ဒယ်တုံးတစ်ခုကို ရွေးနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင် နောက်ထပ် အခြား ကြည့်ရမယ့် လိုအပ်ချက်နှစ်ခုကို ကြည့်သင့်ပါတယ်. • ပထမကန်ဒယ်နဲ့ ဒုတိယကန်ဒယ်တွေဟာ Bollinger bandအင်ဒီကေတာရဲ့ အထက်ပိုင်းအပေါ်ပိုင်းမှာ ရှိနေရပါမယ်.• အကျ လွှမ်းမိုးတဲ့ ပတ်တန် ပုံစံကိုကြည့်တဲ့နေရာမှာ အချိန်ကြာကြာ တက်နေတဲ့ ထရန်းလမ်းကြောင်းတစ်ခုရဲ့ အမြင့်ဆုံးထိပ်ပိုင်းတွေမှာ သွားမကြည့်သင့်ပါ. ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် အဲ့ဒီလိုနေရာတွေမှာ အားကောင်းတဲ့ ပြန်ကန်ကျနိုင်တဲ့ ဆစ်ဂနယ်မျိုး မဟုတ်တတ်ဘဲ ဆက်မတက်ဘဲ နားနေမယ့် ဆစ်ဂနယ်မျိုးသာ ဖြစ်နိုင်တာမို့လို့ပါ. သင်ကြည့်တဲ့ ပတ်တန်ပုံစံက ဒီအချက်တွေနဲ့ ကိုက်ညီနေပြီဆိုရင်တော့ တကယ့်အားကောင်းခိုင်မာတဲ့ အချိန်တိုထရိတ်တဲ့နေရာမှာ အသုံးပြုနိုင်မယ့် ပြန်ကန်ကျမယ့် ဆစ်ဂနယ်တစ်ခုကို ရှာဖွေတွေ့ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်.
14.02.2019 10:53 ဈေးကွက်စိတ်ခံစားချက်မှ သင့်အရောင်းအဝယ်ဆုံးဖြတ်ချက်များအား ဘယ်လိုသက်ရောက်မှုရှိလဲ
သုံးသပ်ချက်များကို ဖတ်ရှု (သို့) စောင့်ကြည့်သည့်အခါ အောက်ပါကြေညာချက်နှင့် မကြာခဏကြုံရလေ့ရှိပါသည်: "ဈေးကွက်စိတ်ခံစားချက်ပေါ်တွင် ရောင်းဝယ်ရန်အကြံပြုထားပါသည်။
ပညာရေး forex ပညာပေးသင်ကြားရေး ရောင်းဝယ်သူတိုင်း သိထားသင့်သည်
04.02.2019 13:15 Head နှင့် Shoulders ပုံစံအတွက် အရောင်းအဝယ်ဗျူဟာ
နည်းပညာသုံးသပ်ချက်တွင်၊ ဈေးနှုန်းအတွက် ရှေ့ဆက်လားရာကိုဆုံးဖြတ်ရန် ကူညီပေးမည့် မတူညီသော ဇယားပုံစံများရှိကြပါသည်။
forex exchange နည်းပညာ(ta) သုံးသပ်ချက် ရောင်းဝယ်သူတိုင်း သိထားသင့်သည်
25.01.2019 16:41 NFP ထုတ်ပြန်ချက်အပေါ် ရောင်းဝယ်ပါ
လယ်ယာမဟုတ်သော လုပ်ခလစာ (သို့) NFPအဖြစ် သိကြသည့် လယ်ယာမဟုတ်သော အလုပ်အကိုင်အပြောင်းအလဲ အဆင့်သည် စီးပွားရေးပြက္ခဒိန်တွင် တန်ဖိုး-အမြင့်ဆုံး အညွှန်းကိန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
usd အရောင်းအဝယ် ဗျူဟာ ရောင်းဝယ်သူတိုင်း သိထားသင့်သည် nfp